GỤỌ NKE Abbey Abkhaz Abui Acholi Adhola Afrikaans Aja Ajië Albanian Albanian Sign Language Alur American Sign Language Amharic Angolan Sign Language Arabic Arabic (Morocco) Arabic (Tunisia) Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Assamese Ateso Attié Aukan Australian Sign Language Austrian Sign Language Awajun Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Balinese Bambara Baoule Basque Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Batak (Dairi) Batak (Dairi) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Betsimisaraka (Northern) Betsimisaraka (Southern) Biak Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Bolivian Sign Language Bosnian Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Bété Cakchiquel Cambodian Catalan Cebuano Chamorro Changana (Zimbabwe) Chavacano Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chin (Tiddim) Chin (Zotung) Chinese (Cantonese) Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chontal (Tabasco) Chopi Chuabo Chuukese Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Colombian Sign Language Comorian (Ngazidja) Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Damara Dangme Danish Dayak Ahe Dayak Ngaju Digor Douala Drehu Dusun Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Edo Efik Emberá (Catío) English Esan Estonian Estonian Sign Language Ewe Fante Faroese Fataluku Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language Fon Frafra French French Sign Language Frisian Fulfulde (Cameroon) Futuna (East) Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Gitonga Gokana Gourmanchéma Gouro Greek Greek Sign Language Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Guarani (Bolivia) Guatemalan Sign Language Guerze Guianese Creole Gujarati Gun Guna Guéré Haitian Creole Hausa Hawu Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Honduras Sign Language Hong Kong Sign Language Huastec (San Luis Potosi) Hungarian Hungarian Sign Language Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Icelandic Igbo Iloko Inakeanon Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Javanese (Eastern) Jula Kabiye Kabuverdianu Kabyle Kachin Kadazan Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Khana Khasi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisii Kisonge Kongo Konkani (Devanagari) Konkani (Roman) Korean Korean Sign Language Kosraean Kpelle Krio Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kurdish Sorani Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Lamba Laotian Latgalian Latvian Latvian Sign Language Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Lovari Low German Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Madagascar Sign Language Madi Makasae Malagasy Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Mam Mambae (Ermera) Mambwe-Lungu Mandjak Mangareva Maninkakan (Eastern) Manipuri Mano Mapudungun Marathi Marquesian (Hiva Oa) Marquesian (Nuku Hiva) Marshallese Mauritian Creole Maya Mayo Mazahua Mazatec (Huautla) Mbukushu Mende Meru Mexican Sign Language Mingrelian Miskito Mixe Mixtec (Guerrero) Mixtec (Huajuapan) Mixtec (Tlaxiaco) Mizo Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Nahuatl (Veracruz) Nama Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nengone Nepali Ngabere Ngangela Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Pidgin Niuean Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Odia Okpe Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Otomi (State of Mexico) Palauan Panamanian Sign Language Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Pemon Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Piaroa Pidgin (Cameroon) Pidgin (West Africa) Pilagá Polish Polish Sign Language Pomeranian Ponapean Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Pular Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Páez Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quechua (Huallaga Huánuco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Quichua (Tena) Rapa Nui Rarotongan Romanian Romanian Sign Language Romany (Albania) Romany (Argentina) Romany (Bulgaria) Romany (Eastern Slovakia) Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Northern Greece) Romany (Romania) Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Roviana Rumanyo Rungus Runyankore Russian Russian Sign Language Rutoro Réunion Creole Saami (North) Salvadoran Sign Language Samoan Sangir Sango Saramaccan Sarnami Sena Senoufo (Cebaara) Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Serbian Sign Language Serer Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shipibo-Conibo Shona Shuar Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Soli Solomon Islands Pidgin Somali Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Susu Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Tajiki Talian Tamil Tandroy Tankarana Tarahumara Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Toabaite Toba Tojolabal Tok Pisin Tokelauan Tongan Toraja Totonac Toupouri Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tyrewuju Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vezo Vietnamese Wallisian Warao Waray-Waray Wayuunaiki Wejewa Welsh Wichi Wolaita Wolof Xavante Xhosa Xârâcùù Yacouba Yoruba Yukpa Zande Zapotec (Guevea) Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zapotec (Villa Alta) Zulu
Mgbe Lazarọs enyi Jizọs nwụrụ, ọ nọrọ abalị anọ n’ili tupu Jizọs erute obodo ya bụ́ Betani. Obodo a dị nso na Jeruselem. Mgbe o rutere, ya na Mata na Meri ụmụnne Lazarọs sooro gaa n’ebe e liri ya. Ozugbo ahụ, ndị mmadụ agbakọta ebe ahụ. Chegodị echiche otú obi si tọọ Mata na Meri ụtọ mgbe Jizọs kpọlitere Lazarọs nwanne ha n’ọnwụ.—Gụọ Jọn 11:21-24, 38-44.
Mata mabu ama na a ga-akpọlite ndị nwụrụ anwụ n’ọnwụ. Ọ ma na Jehova ga-akpọlite ha n’ọnwụ, ha adịrịghachi ndụ n’ụwa a.—Gụọ Job 14:14, 15.
Chineke gwara Adam, sị: “Ájá ka ị bụ, ọ bụkwa n’ájá ka ị ga-alaghachi.”—JENESIS 3:19.
Chineke ji ájá kpụọ mmadụ. (Jenesis 2:7; 3:19) Anyị abụghị ndị mmụọ nwere ahụ́ mmadụ, kama, anyị bụ mmadụ nkịtị. Mmadụ nwụọ, ihe niile dị n’ahụ́ ya anwụọ. Ụbụrụ onye ahụ na-akwụsịkwa ịrụ ọrụ, ọ bụ ya mere ọ naghị echeli echiche. N’ihi ya, mgbe a kpọlitere Lazarọs n’ọnwụ, o nweghị ihe ọ kọọrọ ndị mmadụ na ya mere n’oge ahụ ọ nwụrụ n’ihi na ndị nwụrụ anwụ anaghị ama ihe ọ bụla.—Gụọ Abụ Ọma 146:4; Ekliziastis 9:5, 6, 10.
Chineke ọ̀ na-ata ndị ọjọọ ahụhụ n’ọkụ ala mmụọ ma ha nwụọ? Ebe ọ bụ na Baịbụl kwuru na ndị nwụrụ anwụ amaghị ihe ọ bụla, ọ pụtara na ndị na-akụzi na Chineke na-ata ndị nwụrụ anwụ ahụhụ n’ọkụ ala mmụọ na-agha ụgha. Ha na-ekwutọ Chineke. Ịta ndị mmadụ ahụhụ n’ọkụ abatatụbeghị Chineke n’obi.—Gụọ Jeremaya 7:31.
Ndị nwụrụ anwụ enweghị ike ikwu okwu, ha enweghịkwa ike ịnụ ihe. (Abụ Ọma 115:17) Ma, ndị mmụọ ọjọọ dị arụrụala. Ha nwere ike iji olu onye nwụrụ anwụ gwa mmadụ okwu, ka onye ahụ chee na ọ bụ onye ahụ nwụrụ anwụ na-agwa ya okwu. (2 Pita 2:4) Jehova nyere iwu ka anyị ghara ịchọwa ụzọ anyị na ndị nwụrụ anwụ ga-esi kwurịta okwu.—Gụọ Diuterọnọmi 18:10, 11.
Ọtụtụ nde mmadụ ndị nọ n’ili ga-ebilite n’ọnwụ dịrị ndụ n’ụwa a. A ga-akpọlitedị ụfọdụ ndị ajọ omume n’ọnwụ. Ndị a bụ ndị mere ihe ọjọọ n’ihi na ha amaghị iwu Jehova.—Gụọ Luk 23:43; Ọrụ Ndịozi 24:15.
A ga-akụziri ndị a kpọlitere n’ọnwụ eziokwu banyere Chineke, kụziekwara ha otú ha ga-esi gosi na ha nwere okwukwe na Jizọs ma na-erubere ya isi. (Mkpughe 20:11-13) Ndị mewere ezi ihe mgbe a kpọlitechara ha n’ọnwụ ga-adịzi ndụ ebighị ebi n’ụwa.—Gụọ Jọn 5:28, 29.
Ihe mere ịkpọlite ndị mmadụ n’ọnwụ ga-eji nwee isi bụ na Chineke zitere Ọkpara ya ka ọ nwụchitere anyị ọnwụ. N’ihi ya, mkpọlite a ga-akpọlite ụmụ mmadụ n’ọnwụ gosiri na Jehova hụrụ anyị n’anya ma na-emetere anyị ebere. Ọ bụrụ na Chineke akpọlite ndị nwụrụ anwụ, olee onye ị ga-achọ ịhụ?—Gụọ Jọn 3:16; Ndị Rom 6:23.
Ndị Mmụọ E Kere Eke—Otú Ha Si Emetụta Anyị